Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): January 2016
Pat Jasan Members Begin Their Poppy Eradication Efforts
at 1/26/2016 09:13:00 PM
Featured, Headlines January 26, 2016 KLN
Members of civilian-initiated anti-drug campaign group, Pat Jasan, left Chyam Ju this morning to opium poppy fields at about 8 am after receiving green light from Burmese Army’s northern commander and heads of Kachin State’s police and anti-narcotics task force.
Burmese Army’s northern commander Brigadier Gen. Win Bo Shein and head of Kachin State’s anti-narcotics task force paidavisit to Pat Jasan members in Chyam Ju on Jan 25. About 50 government personnel from police, anti-narcotics and forestry department accompanied Pat Jasan members to provide security. Pat Jasan members have been asked by Burmese authorities to remove their camouflage uniforms and dress up in regular clothes.
About 1300 Pat Jasan members who had been stranded for three days in Wai Maw left for Kampaiti, Sadung, Chipwi, Tsin Chyai, Marsar and Chyiak Loi on Jan 23 but they were again stopped due to security concerns at Chyam Ju, located on the way to Chipwi. Local poppy farmers and local militia members holding swords, sticks, muskets, and rifles were reportedly waiting for Pat Jasan members on the way between Wai Maw and Sadung.
Pat Jasan members said the size of land used for opium poppy farming in Sadung, Kampaiti, Pangwa and Chipwi area in eastern Kachin State is doubled than their initial estimate of 2000 acres.
Most opium poppy fields in eastern Kachin State are located in areas controlled by Burmese Army-backed Border Guard Force led by Zahkung Ting Ying, local militia unit Htarne Pyi Thu Tsits led by Bawm Lang and Burmese Army, groups which are seen by anti-drug campaigners as protectors of poppy fields and opium production.
A local Christian minister said local farmers asked for rice if anti-drug campaigners eradicate their opium poppy fields. Local farmers also asked for Burmese Army and government personnel to come and destroy their poppies fields instead of Pat Jasan members, said the minister.
စစ်အစိုးရနှင့်အတူဖော်ဆောင်မည့် NLD နိုင်ငံရေး မဟာဗျူဟာ NLD လည်းပြည်သူတွေကို ငါးမျှားချိတ်တပ်ပြီး
at 1/25/2016 11:07:00 AM
စစ်အစိုးရနှင့်အတူဖော်ဆောင်မည့် NLD နိုင်ငံရေး မဟာဗျူဟာ
NLD လည်းပြည်သူတွေကို ငါးမျှားချိတ်တပ်ပြီး ဒေသဖွင့်ဖြိုးရေး စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသား ဒေသများကို ထိန်ချုပ်မဲ့မဟာဗျူဟာတွေပါဘဲ
အရေးကြီးတဲ့ နေရာတွေမာတိုင်းရင်းသားထဲကခန့်မယ် ကိုယ်ရေးအရာရှိ နဲ့ နိုင်ငံရေးပညာရှင်တွေ နေရာမာ ဗမာကြီးဝါဒဖြစ်တဲ့ ဗဟိုအားကောင်းဖို့ ရေးဆွဲထားတာကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဘာဘဲ
တစ်နိုင်ငံလုံးက ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ပြီး ပြည်ထောင်စု အစိုးရက အကျိုးအမြတ် ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း ရယူပြီး ဒေသခံတွေကို ၅ ရာခိုင်နှုန်း ဘဲပေးဖို့ကြံစည်နေတာပါဘဲ
တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေး တပ်ဖွဲ့တွေကို ယခုအစိုးရအတိုင်း ငွေကြေးနဲ့ အင့်အားပျော့စေမဲ့ အစီအစဉ်လည်းပါရှိပါတယ်
ဖားကန့် ကိုထိန်းချုပ်ပြီး အမြတ်အစွန်းထုပ်ယူဖို့ NLD အားခဲနေတယ် ဒေသခံတွေကို အပျော့ဆွဲဆွဲပီး KIO နဲ့အလမ်းဝေးကွာအောင်ဖန်တီးမဲ့ အရင်ကဖက်စပ်ဝင်တဲ့ ဗျူဟာ ဟောင်းဘာဘဲ ခဏမြောက်စားပြီး ကန်ထုပ်မဲ့နည်းပါ
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ရပ်တန့်သလိုနဲ့ မလိခဘက်ကဆည် ၂ ခု အင်မိုင်ခ ဘက်ဆည် ၄ ခုကိုတည်ဆောက်ပြီး ဗမာပြည်မစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်အကြောင်းပြကာ ကချင်ပြည်ကိုရာသက်ပန်ကိုလိုနီစီမံကိန်းပါဘဲ
ဘယ်တိုင်းရင်းသားဒေသကစီမံကိန်ဖြစ်ဖြစ် ဗမာထဲစီးဝင်အောင်ရေးဆွဲထားတာ တွေ့ရတယ်
နွားဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား ထဲက ထမင်းခဲစားပြီးခေါင်းဖြူသူတွေဟာ ပညာရှင်ဆိုသူတွေရေးဆွဲထားတဲ့ ဗဟိုအားကောင်းရေးဗမာကြီးဝါဒအတွက် အသုံးတော်ခံတွေဖြစ်နေကြတာပါဘဲ
Federal နဲ့ပိုမိုဝေးသွားစေဖို့ NLD ကိုပြစားလိုက်တာ နောက်ကောက်လိုက်သော တိုင်းရင်းသား ထမင်းခဲစားခေါင်းဖြူသူတွေကြောင့် ဗမာအောက်ကရုန်ရခက်ဦးမဲ့ တိုင်းရင်းသား အနာဂတ်
with Awra Lera and 13 others. January 22 at 10:50pm ·
at 1/25/2016 10:41:00 AM
ပြည်ပအားကိုးပုဆိန်ရိုး ပြောသူတွေ ရုရှားစစ်ဗိုလ်တွေအကြံရယူပြီး တိုင်းပြည်မွဲနေခဲ့တယ်
NLD လည်း ပညာရှင်ဆိုပြီး Havard ဆင်းတွေကိုအထင်ကြီး ဗဟိုအားကြီးရေးစီမံကိန်းအပ်တော့ ဟိုကောင်တွေလုပ်မှာက ဗမာအားကောင်းရေးဖြစ်နေတယ်
တိုင်းရင်းသား တွေကိုနေရာပေးထား ပြီး ကိုယ်ရေးအရာရှိတွေကို ဗမာအများစုခန့်အပ်မယ်ဆိုတော့ ဘာထူးမာလည်း
NLD ထဲပါဝင်သော တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဖြူတွေလည်း ထမင်းခဲစားခေါင်းဖြူတွေအဆင့်ဆိုတော့
တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေ ဗမာတွေနဲ့ ကင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းက အကောင်းဆုံးဆိုတာ တိုင်းရင်းသား ညီလာခံမာတွေ့ မယ်ထင်ပါတယ်
ဗမာပြည်နယ်သတ်မှတ်ရေးကို NLD လက်မခံခြင်းက အဖြေပါဘဲ
Myintkyina, capital city of Kachin state to perticipate in the anti-drug movement to destroy,cut the growing poppy plants in her own land
at 1/20/2016 12:21:00 PM
The Kachins from the most nothern part of Myanmar had been suffered from drug abuses since many decades. According to analyzed of one of anti-drug movement organizations base by civil society sad that 'by the drug abuses, round about six Kachin drug victims were dead every day, especially from the year of 2000'..
In this situation, the church can not stay herself alone and involved in the anti-drug movements since overe last year, this time over 1,400 women and men from the different local churches, denominations piled up in Waimaw township next to the Myintkyina, capital city of Kachin state to perticipate in the anti-drug movement to destroy,cut the growing poppy plants in her own land especially east area of the Kachin state, where poppy plants growing places since over last two days.( some parts of growing poppy plants had been already eliminated by activitiests especially weatern area of Kachin land). This time the movement is also allowed by the local goverment but they are still forbidden by the troop..the activitists can not still march forward....
Acording to confirmative information also, anti-drug movement guys and women are also waiting for by the overahundred ownerships of poppy fields with dumhpau or local handmade guns to shoot them by making by ambush on their forwarding line....
at 1/20/2016 12:16:00 PM
Kani Majan Labau ni
Waimaw Ginra KanPaiTi Sadung
Kani pat jasan rawt sana rai nga sai Dap kung 12 rai na shawa n gun 1200 rai nga ai
Wp mungdan Kani pat jasan Dan shamyit masing
Shiga la ai Hka kamai
ကမ္ဘာကျော်လက်ဝှေ့သမား ကချင်အမျိုးသား အောင်လအင်ဆန်း Burmese Python မြန်မာပြည်ရောက်ရှိ
at 1/06/2016 11:37:00 AM